Nanambara ny vaovao izay ho tonga amin'ny Google Maps | Androidsis
Mandritra ny fotoana ela hitantsika fa lasa fampiharana tanteraka i Google Maps. Tsy rindranasan-tsambo sy sarintany fotsiny intsony izy io. Rehefa mandeha ny fotoana dia manolotra asa fanampiny fanampiny ho antsika izy. Betsaka amin'izy ireo no mety indrindra rehefa manao dia lavitra isika. Ka natao satroboninahitra ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra azontsika apetraka amin'ny findaintsika.
ankehitriny, manakaiky ny fahatongavan'ny beta an'ny fampiharana Android. Efa kinova 9.70 amin'ny Google Maps izy io. Toy ny mahazatra, rehefa tonga ny kinova vaovao dia manao izany amin'ny vaovao. Zavatra miverina amin'ny tranga misy ny fampiharana izay mamela antsika fanatsarana isan-karazany mahaliana izaitsizy.
Ireo vaovao ireo dia mbola tsy tonga tany amin'ny Google Maps. Izy rehetra Hita tao amin'ny kaody ny fampiharana, noho izany dia fotoana fohy alohan'ny ahafahan'ireo mpampiasa azy ireo. Fa amin'izao aloha dia tsy maintsy miandry ela kokoa isika. Na izany aza, ny iray amin'izy ireo dia afaka mankafy izao raha manana Google Maps 9.70 Beta ianao napetraka amin'ny telefaona Android anao. Avelanay eto ambany miaraka amin'ny vaovao rehetra momba ny fampiharana ianao:
1 Manampia na manaisotra ireo toerana notsidihina tamin'ny Maps
2 Manampia karoka manokana
3 Mividy tapakila
4 Isa miaraka amin'ny emoji
5 Manampia famaritana amin'ny sarin-tsakafo
7 Fikarohana hevitra
8 Fomba vaovao hanombanana ny trano fisakafoanana
9 Toro lalana mihatsara
10 Tombana amin'ny fisian'ny fiantsonana
Manampia na manaisotra ireo toerana notsidihina tamin'ny Maps
Mpampiasa izay te-hanampy na esorina ireo tranonkala izay notsidihin'izy ireo tamin'ny fampiharana azon'izy ireo atao an-tanana izao. Ampy ny mandeha amin'ny takelaka notsidihina sy ao anatiny ao amin'ny faritra misy ny toerako. Amin'izany no ahafahan'izy ireo manampy na manala tranokala efa nalehany. Amin'ny fanaovana an'ity, ireo tranonkala voafafa ireo dia tsy miseho amin'ny fandaharam-potoananay. Saingy, raha manampy iray isika dia hivoaka izany. Azontsika atao koa ny mampiditra tranonkala izay efa nalehantsika saingy tsy nisoratra anarana ny fangatahana.
Manampia karoka manokana
Google Maps dia hamela ireo mpampiasa hanao fikarohana manokana. Azon'izy ireo ampiasaina ny teny lakile momba ny toerana manokana. Ity fampiasa ity dia ho azo zahana amin'ny efijery an-trano an'ny rindranasa. Ho fanampin'izay, hanana ny fahafaha-manao ihany koa ireo mpampiasa mamorona hitsin-dàlana manokana. Noho izany, hitantsika fa manomboka mamela ny mpampiasa hanamboatra lafin-javatra sasany araka izay itiavany azy ny fampiharana.
Zava-baovao mampanantena ny hanao izany ny fampiasana Google Maps feno kokoa. Hita tao amin'ny kaody fampiharana ihany koa. Ka antenaina hahatratra azy io amin'ny fotoana iray. Ho afaka ny mpampiasa mividy tapakila amin'ny hetsika raha tsy mamela ny fampiharana. Amin'izany fomba izany, raha te-hijery sinema isika, rehefa mijery ny sarimihetsika dia afaka mividy ny tapakila mivantana.
Isa miaraka amin'ny emoji
Toa hitatra ny rafitra fanamarihana ny fampiharana. Hatramin'ny fotoana tianao handao ny hevitrao momba ny tranokala manokana dia afaka mamela emoji na maromaro ianao ho toy ny hevitra iray. Tsy mila manome hevitra.
Manampia famaritana amin'ny sarin-tsakafo
Rehefa mitsidika trano fisakafoanana iray izahay Google Maps dia mamporisika antsika handefa sarin'izay nohaninay ao amin'io toerana io. Saingy, namela sary fotsiny ny fampiharana, tsy misy zavatra hafa. Tsy ho ela dia hanana ny fahafaha-manao izany isika ampio antsipirihany amin'ireo sary ampidininay. Ka ireo mpampiasa mahita azy ireo dia hanana fampahalalana bebe kokoa.
Ny fampiharana dia hanampy anao haka pikantsary hizara azy ireo amin'ny mpampiasa hafa Amin'io. Hetsika natokana ho an'ireo mpampiasa mbola tsy mahay mampiasa ny rindranasa izany.
Ny fiasan'ity asa vaovao ity dia tsy mbola naseho. Na izany aza, manome ny fahatsapana fa fomba iray ahafahana mahita hevitra mifandraika amin'ny tranokala manokana amin'ny fomba tsotra. Noho izany dia ho hitanao mora kokoa ny hevitry ny mpampiasa Google Maps amin'ny fotoana rehetra.
Fomba vaovao hanombanana ny trano fisakafoanana
Antenaina fa tsy ho ela dia hasehon'ny Google Maps anao ny varavarankely pop-up hahafahanao maneho hevitra amin'ny toerana sasany. Efa misy izany amin'izao fotoana izao, fa ao amin'ireo varavarankely ireo famantarana vaovao no hampidirina amin'ny trano fisakafoanana manome isa. Na dia tsy nanambara ny fomba.
Toro lalana mihatsara
Ity fampandehanan-draharaha ity dia hampandre ny mpampiasa ny halavirana tokony halehan'izy ireo hanatratrarana ny toerana itodiana. Ho fanampin'ny fotoana horaisina. Hampahafantatra ihany koa izy ireo ny amin'ny fotoana fiandrasana hahazoana fitaovam-pitaterana (bus, metro, fiaran-dalamby ...)
Tombana amin'ny fisian'ny fiantsonana
Google Maps dia hanampy antsika hahafantatra raha azo atao ny mijanona mora foana amin'ny toerana alehantsika. Noho izany, hampahafantatra antsika izy io raha mety hanana toerana malalaka na tsia ireo toeram-piantsonan'ireo fiara ireo. Na dia tsy naneho hevitra momba ny fomba hahazoan'izy ireo ny vaovao aza izy ireo hanolotra ireo tombana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Jereo ny vaovao rehetra amin'ny Google Maps 9.70 beta
Ny safidy tsara indrindra mankany Shazam ho an'ny Android